Ganacstada Boosaaso & Dowlada Puntland oo ka kulmay Arimaha Burcad badeeda – SBC
Ganacstada Boosaaso & Dowlada Puntland oo ka kulmay Arimaha Burcad badeeda
Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka ee rugta Ganacsiaga magaalada Boosaaso waxaana soo agaasintay rugta ganacsiga iyo warshada Puntland,
Kulankan ayaa waxaa kasoo qaybagalay Ganacsato, Masuuliyiin kasocday xukuumada Puntland, culimaa’udiin, Siyaasiyiin iyo marti sharaf kale .
Muhiimada kulankan ayaa waxa ay aheyd ujoodooyin dhawr ah oo ay ugu weyneyd ka hadlida dhibaatada ay Burcad badeedu ku hayso ganasiga deegaanada Puntland iyo sidii ay ganacsatadu isula shaqeyn lahayd.
Ugu horayntii waxaa kulanka kahadlay Siciid Xuseen Ciid gudoomiye ku xigeenka rugta Ganacsiga Puntland isagoona si toos ah u furay kulanka,
Siyaasi Cali Cabdi Awaare kana mida ganacsatada reer Puntland ayaa si aada ugu dheeraaday dhibaatada ay Burcadu ku hayso ganacsiga Puntland isaga oo sheegay in waayadan danbe ay bilaabeen in ay afduub ugeystaan doon yahay gancsiga ah ee kabaxa dekada Boosaaso ama kusoo xiranaya.
Wuxuuna siyaasi Cali Cabdi Awaare sheegay in ay muhim tahay in layska kaashado wax kaqabashada Burcad badeeda wuxuuna ka dhawaajiyay in ganacsatada looga baahan yahay in ay gacan kageystaan sidii loo iibin lahaa doonyo lagu ilaaliyo dekada Boosaaso lagagana hortago Burcab badeeda .
Sidoo kale Aaare wuxuu soo hadal qaaday dooni xalay ku dagtay gudaha dekada Boosaaso, wuxuuna sheegay in xiligii uu gaaray dekada uusan ku araga cid kamida ganacsatada oo kusgnaa dekada Boosaaso si loo bad baadiyo doonidaasi.
Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay sheekh Daahir Aw Cabdi oo sheegay in mar hore loo baahnaa in wax laga qabto Burcad badeeda, isagoo ka dhawaajiyay in kooxaha falalka qafaalaka ah geysanaya yihiin kuwo ku nool magaalada Boosaaso lana garanayo marka waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto.
“Waan ognahay deegaanka aan kunool nahay waa qabiil qabiil marka waa in wax qabashada burcada laga soomaraa dhanka waxgaradka beelaha” sidaasi waxaa yiri sheekh Daahir Aw Cabdi.
Mid kamida Ganactada oo kuhadlayey afka Ganacsatada ayaa waxa uu sheegay in ay jirto gaabis dhanka xiriirka dawlada iyo ganacsatada ah, isagoo tilmaamay in ay jiraan ganacsato badan oo reer puntland ah oo ganacsigooda u wareejiyay deegaano kale si ay uga ganacsadaan taasna waxaa sababay arimo dhowar ah oo ay ka mid yihiin gaabiska dhanka xiriirka dawlada iyo ganacsatada .
Ismaaciil oo ku hadlayey afka ganacsatada ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax laga xumaado in markab laga leeyahay mamulka somaliland oo uraran ganacsato walaalaheena ay afduubteen burcada , taas badelkeeda waxaa fiicnaan lahayd ayuu yiri in ay afduubtaan markab uraran ganacsato reer puntland ah sida uu hadalka u dhigayee.
Wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha gudaha Puntland Cali Yuusuf Cali Xoosh oo madasha joogay ayaa waxa uu sheegay in arimaha Burcad bedeeda ay tahay in wax lagaqabto madaama ay maanta dameceen doonyihii iyo maraakiibtii dekadeena urarneyd saasi oo kale waxaa lagu magacaabaaa tuug nacas.
“Masuurtoobayso in dadka falalkaas sameynayaa ay ku sugnaadaan degaanada Puntland, dawlada dhawaan talaabo ayey kaqaadi doontaa, ganacsatadana waxaa looga baahayn yahay in ay doorkooda qaataan qaniin yaba qanin ayaa kaa fujisee in gadiidka la afduubtay aad ugu deeqdaan gaadiidkiin siloo soo bad baadiyo” sidaasi waxaa yiri Cali Xoosha .
Wuxuuna wasiirku xigeenku sheegay in hada ay Puntland kusugan yihiin wafti kasocda somaliland lana soo dhaweeyay ,waxeyna usocdaan waa arinta markabka waxaana larabaa in gacan lagageysto arinkaasi.
Gaba gabadii kulanka waxaa soo xiray wasiirka wasaarada Amnig Puntland Khaliif Ciise Mudan oo sheeegay in waxbadan uu wax kaqaban doono . isgoona u mah celiyey gancsatada sida wanaagsan u casuumay,
Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu balaarnaa oo dhexmara ganacsatada iyo dawlada waxaana kulankaasi looga dhawaaqay guddi kasheqeeya arimahaa isku xirka dawlada iyo gansatada.